II Fanasokajiana ampahany amin'ny loka Bitácoras 2013 | Avy amin'ny Linux
II Fanasokajiana ampahany amin'ny loka Bitácoras 2013
Izy ireo dia Rohy | | About us, hafa
Ny fanasokajiana fizarana faharoa an'ny loka Bitácoras 2013 dia vao nivoaka ary mitondra vaovao ratsy be aho ary izany dia teo amin'ny laharana faha-21 isika raha tamin'ny seta voalohany dia teo amin'ny laharana fahasivy izahay.
Mazava ho azy fa mila ny vatonao ianao mba hianika amin'ny toerana telo voalohany hahafahana mahazo ny loka.
Raha tsia, tsara, farafaharatsiny nanandrana indray izahay.
Tsarovy fa afaka mifidy ho anay ianao amin'ny fikitihana ny sary eo ankavanana, na eo ambany raha mijery ny bilaogy avy amin'ny finday na fitaovana hafa azo entina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » II Fanasokajiana ampahany amin'ny loka Bitácoras 2013
Hmm ... tsara, mahamenatra fa tsy afaka manasokajy isika amin'ity taona ity, na dia efa nilaza tamin'ny bilaogera tamin'ny alàlan'ny Twitter aza aho, ity bilaogy ity dia tsy tafiditra ao anatin'ny sokajy Teknolojia. Tokony hisy sokajy ho an'ny lozisialy na zavatra toa izany.
Efa mifidy aho ary tsy afaka mifidy amin'ny sokajy iray ihany, efa nanao ny anjarako aho.
Misaotra betsaka anao amin'izany ^ _ ^
Heveriko fa teknolojia izy io, amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fomba sy ny fahalalana dia mamorona fikambanana teknolojia (rindrambaiko) isika na mitaona azy.
Teknolojia malefaka io, tena mahaliana ny fotokevitra "teknolojia malefaka" ary malalaka be
Na dia tsy mandresy aza izy ireo dia manome ny fanohanako an'ity bilaogy ity aho amin'ny alàlan'ny fanoratana ao anatiny sy amin'ny fametrahana ny vatoko (ary efa nataoko) tao amin'ny Bitacoras.com.
Vao nisoratra anarana hifidy aho, very iray hafa.
Miala tsiny aminao aho milaza aminao fa mandà tsy handray anjara aho (na dia tsy mpifidy aza) amin'ny loka Bitácoras 2013.
Tsotra ny antony, tsy manana "Informatika" ho sokajy izy ireo; Tsy fantatro izay tontolo iainan'izy ireo ...
Mino aho, ary tena fiheverana manokana fa tsy tokony handray anjara amin'izany tsenan'ny loka izany isika. Tsy maintsy miova ny zavatra sasany, fa raha tsy manindry isika dia hitohy ny zava-drehetra.
Desktop Linuxero tsara indrindra: Oktobra 2013 - Vokatra
Tonga teo akaikin'ny rafitra Debian Edu i Debian 7.2